မျက်လုံး ပြူးပြူးလာတဲ့အခါ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုရင် မျက်လုံးရဲ့နောက်မှာ အဆီတွေ၊ ကြွက်သားတွေ၊ တစ်သျှူးတွေ စုပုံလာပြီး မျက်လုံးဟာ မျက်လုံးအိမ်ထဲမှာ မဆန့်တော့လို့ အရှေ့ကို ထွက်လာရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
>> ဘာရောဂါတွေကြောင့် ဖြစ်တာလဲ?
မျက်လုံးက တစ်ဖက်တည်း ဖြစ်တာလား၊ နှစ်ဖက်လားဆိုတာ ကြည့်ပြီး ဘာရောဂါဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။ အဖြစ်အများဆုံးကတော့ လူအများက လည်ပင်းကြီးရောဂါလို့ပဲ အကြမ်းဖျင်းသိထားတဲ့ Graves' disease ပါ။ ဒီရောဂါဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားဟာ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်တာပါ။ အဓိကအနေနဲ့ လည်ပင်းရဲ့သိုင်းရွိုက်အကျိတ်ကို တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ လည်ပင်းက အရမ်းအလုပ်လုပ်ပြီး ဟော်မုန်းတွေ ထုတ်ပါတော့တယ်။
ဒီအခါမှာ မျက်လုံးဘေးက ကြွက်သားတွေ၊ တစ်သျှူးတွေက ရောင်ရမ်းလာပြီး မျက်လုံးပြူးလာပါတော့တယ်။
နောက်တစ်ခြား အကြောင်းအရာတွေက ဒဏ်ရာရတာ၊ မျက်လုံးနောက်က သွေးကြောက ပုံမမှန်ဖြစ်တာ၊ မျက်လုံးကင်ဆာ၊ ရောဂါပိုးဝင်တာ နဲ့ မျက်လုံးထဲ သွေးထွက်တာတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
>> လက္ခဏာတွေက -
မျက်လုံးအရမ်းပြူးတာအပြင် မျက်သားခြောက်တာ၊ နာတာ၊ မျက်လုံးလှုပ်လို့ အဆင်မပြေတာ၊ အမာရွတ်ဖြစ်တာ၊ အိပ်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်၊ မျက်တောင်ခတ်တာဖြစ်ဖြစ် မျက်လုံးကို ပိတ်ရခက်တာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
>> ရောဂါကို ဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲ?
အဓိကအနေနဲ့ မျက်လုံးဆရာဝန်က မျက်လုံးကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ ဆရာဝန်က လည်ပင်းရောဂါကို မသင်္ကာရင် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းပမာဏကို သိနိုင်အောင် သွေးစစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးလှုပ်လို့ ရ/မရ၊ ဘယ်လောက် မျက်အိမ်အပြင် ထွက်မထွက်တွေကို တိုင်းတာစစ်ဆေးရပါမယ်။
အရမ်းဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်နေရင်တော့ ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်တွေ၊ သံလိုက်ဓာတ်မှန်တွေ ရိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ အလုံးအကျိတ်တွေ ရှိနေရင် ဘယ်လောက်ကြီးနေတယ်၊ ဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာ တိတိကျကျ သိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး နောက်ခံရောဂါကို ကုသရပါမယ်။ သိုင်းရွိုက်ကြောင့် ဖြစ်တာဆိုရင် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းပမာဏကို ထိန်းညှိဖို့ ဆေးတွေပေးပါလိမ့်မယ်။ မျက်လုံးကိုတော့ သက်သာစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပိုဆိုးမလာအောင်တော့ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ရောင်ရမ်းတာကြောင့် ဖြစ်တာဆိုရင် စတီးရွိုက်လို အရောင်ကျဆေးတွေ ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်ပဲ မျက်လုံးပြူးလာလာ နာလာပြီဆိုရင် စတီးရွိုက်ပေးလို့ ရပါတယ်။
အရမ်းဆိုးရင်တော့ ခွဲစိတ်ကုသရပါလိမ့်မယ်။ မျက်လုံးအမြင်အာရုံကို ထိခိုက်လာရင်လည်း ခွဲစိတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
မကုဘဲထားတာ ကြာလာလေ၊ ပိုဆိုးလာလေဖြစ်ပြီး ကုသဖို့ ခက်လာလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သိပြီဆိုတာနဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။